1.Isan'izany i Indila. Namoaka raki-kira tamin’ny taona 2014 tany ary nitana ny laharana voalohany mihitsy ny hirany toa an-dry Tourner dans le vide, Derniere danse tamin'izany. Araka ny nambarany dia tsy nampoiziny ny lazany tampoka ka nanapa-kevitra ny hangina mihitsy aloha izy.
2.Tena be mpankafy i Jena Lee, fantatra tamin'ilay hira "J'aimerais tellement". Niezaka ny hitady lalana tao anatin’ny tontolon'ny mozika ihany izy taorian’ny raki-kirany voalohany saingy tsy be mpankafy intsony izany. Nanomboka teo dia tsy heno intsony izy ary nidify tsikelikely teo amin’ny sehatry ny kanto.
3.Nalaza ery ilay hira "Dragostae Din Tae" navoakan'ny tarika Ozone tamin'ny taona 2004. Be mpankafy izany na dia tsy fantatra loatra aza ny tena tian'ilay tononkira ho lazaina. Nisaraka nefa ny tarika tamin’ny taona 2015 ary samy nandeha irery saingy tsy nalaza intsony izy telolahy mpikambana.
4.Nalaza ihany koa raha ilay mpihira Craig David, tao anatin’ny gadona Rn'B tany amin’ny taona 90 tany. Ilay hirany 7 days no tena nahafantarana azy. Miavona sy misy toetra nefa izy ka nanjary vitsy mpankafy ary na ireo raki-kirany rehetra aza dia nihalefy tsy nisy mpividy intsony. Nivadika ho mpampandihy indray izy amin'izao fotoana ka any no hahafantarana azy kokoa.